Sanganisa Google Adwords uye Salesforce neBizible Analytics | Martech Zone
Muvhuro, Mbudzi 17, 2014 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Zvinonzwisisika inokutendera kuti uongorore mashandiro emaAdwords ako zvichienderana nekutendeuka pane kubaya, zvichikubvumidza kuti ushande wakasarudzika ne Salesforce kuyera mashandiro anoenderana nemushandirapamwe, boka revashambadziro, zvemukati zveshambadziro, uye nhanho yemazwi. Kubva Zvinonzwisisika inoshanda neazvino mushandirapamwe wekutevera muGoogle Analytics, iwe unogona nyore nyore kuteedzera yakawanda-chiteshi pese pakutsvaga, zvemagariro, zvakabhadharwa, email uye mamwe makwikwi.
Makiyi Akakosha akanyorwa pane Inowanikwa saiti
AdWords ROI - zvinokutendera kuti uboye zvakadzama paAdWords ROI pamushandirapamwe, boka revashambadziro, zvemukati zveshambadziro, uye nhanho yemazwi makuru, kuti ugone kuyera nekuita sarudzo dzekutsvagisa dzekutsvaga zvichibva pamari.
Multi-Chiteshi Kutevera - inoshuma Google Analytics maitiro UTMs parameter zvakananga muSalesforce, iyo inoita kuti kuongorora nekugadzirisa Chero ipi yekushambadzira pamhepo neROI nyore.
Yakadzama Kutungamira Nhoroondo - Shongedza timu yako yekutengesa neruzivo rwekushambadzira rwavanoda kuvhara mimwe mikana. Ona maitirwo ako nehukama neako saiti vasati vatendeuka, pamwe neese akakosha ekushambadzira info.
Nyaya Dzakanyorwa - Kushambadzira pamhepo kuri kuwedzera kuomarara uye kupatsanurwa. Gadzira inoitika stock stock, pamwe neasingaverengeke etsika tsika mishumo kuti ikwane bhizinesi rako.
Kubatanidzwa kwakawanda - Kubva kuSalesforce zvigadziriso zvekushambadzira otomatiki, zvemukati manejimendi masisitimu uye kunyatso Optimizely yeA / B Kuedza. 60% ye Zvinonzwisisika vatengi vanoshandisawo Marketo, Hubspot, Chiito-On, kana Eloqua. Bizible zvakare ine imwechete-tinya kumisikidza neWordPress, Joomla, kana Drupal.
Unogona kuwana Inobatika muSaleforce AppExchange.
Tags: ab testChiito-Onchirevobiziblecontent management systemsdrupaleloquagoogle adwordshubspotJoomlamarketing automationmarketooptimizelysalesforcevatengesi vanochinjanavatengesi ppcWordPress